संसदीय गणितले उपेन्द्र यादवलाई देशकै नेतृत्व गर्ने सम्भावना दिएको छ : सुमन शर्मा – Sancharak
Home > breaking > संसदीय गणितले उपेन्द्र यादवलाई देशकै नेतृत्व गर्ने सम्भावना दिएको छ : सुमन शर्मा
संसदीय गणितले उपेन्द्र यादवलाई देशकै नेतृत्व गर्ने सम्भावना दिएको छ : सुमन शर्मा
मनिता चौलागाई १४ माघ २०७४, आईतवार १६:०५ January 28, 2018 breaking, top news, विचार/अन्तर्वार्ता, समाचार
संगठन र प्रभावका दृष्टिले संघीय समाजवादी फोरम नेपाल सम्भवतः मधेश केन्द्रित दलमध्ये सबैभन्दा सशक्त दल हो भन्दा अतिश्योक्ति हुँदैन । तर, एउटा दलका रूपमा फोरम नेपालको सांगठनिक सबलताको पछाडि तिक्ततापूर्ण अतीत छ । सत्तामोह र बलिया बन्ने महत्वाकांक्षाका कारण पार्टीका कतिपय नेताकार्यकर्ताहरूका कारण यो पार्टी पटकपटक विभाजनको शिकार भयो । तर, उपेन्द्र यादवको धैर्य, संयम तथा कुशलताका कारण बडो अप्ठ्यारो समयमा पनि सुरक्षित ढंगले अवतरित हुँदै फोरम नेपाल आजको अवस्थामा आइपुगेको हो । अध्यक्ष यादवको कठोर प्रशिक्षणमा राजनीतिक यात्रा तय गर्न आँटेका थुप्रै युवाको पार्टीप्रतिको निष्ठा र अनुशासनको प्रतिफल नै हो कि कुनै बेला कमजोरउन्मुख पार्टी जनतामाझ दह्रो गरी स्थापित र निर्णायक भएको छ । अर्थात् आफ्नो पुरानो साख फर्काएको छ । पार्टी र नेतृत्वप्रति आस्थावान् तिनै युवामध्ये एक हुन् सुमन शर्मा रायमाझी । आफ्नो अटुट प्रतिबद्धता र निरन्तरको समर्पणले पार्टी वृत्तमा चर्चित एवं लोकप्रिय नेतृका रूपमा स्थापित रायमाझी प्रदेश नं. ५ का सदस्यमा समानुपातिकतर्फबाट निर्वाचित भएकी छिन् । प्रस्तुत छ प्रदेश सांसद शर्मासँग सञ्चारका लागि रेणु सिँहले गरेकी अन्तर्वार्ताको सारंक्षेप ।
प्र्रदेश सांसदका रूपमा कस्तो अनुभव गर्दै हुनुहुन्छ ?
जनता र पार्टीको प्रतिनिधित्व गर्दै संसद्मा जान पाउनु निश्चित रूपमा एउटा उपलब्धि हो । तर, यसलाई त्यस ढंगबाट भन्दा पनि मैले अवसर, चुनौती र सम्भावनाका रूपमा लिएकी छु । पार्टी संगठनमा काम गरिरहँदा मैले पार्टीका नीति, सिद्धान्त र कार्यक्रमका विषयमा जनतामाझ धेरै कुरा गरेकी छु । ती जम्मै कुरा मूलतः विकास र रूपान्तरणसँग सम्बन्धित छन् । अबको समय भनेको आफ्नो पूर्वप्रतिबद्धताअनुरूप ती कुरालाई व्यवहारमा उतार्ने हो । जसका लागि म आफूलाई मानसिक रूपमा तयार गर्दैछु । वैचारिक र व्यवहारिक स्तरमा पहिलेदेखि नै तत्पर रहँदै आएकी छु भन्ने कुरा भन्नै पर्दैन । पार्टीका आदरणीय अध्यक्षज्यूको कुशल नेतृत्व र न्यानो अभिभवकत्वमा हामीले पार्टीको राजनीतिक मार्गचित्रअनुरूप अत्यावश्यक अजेन्डालाई प्रदेशसभामा अघि बढाउनेछौं । यसका अतिरिक्त देशका अन्य प्रदेशको तुलनामा मेरो प्रदेशमा पार्टी संगठनलाई थप दुरुस्त बनाउने चुनौती छ । प्रदेशमा जनताले हामीलाई माया गरेका छन् तर पर्याप्त गृहकार्यको अभावमा हामी यहाँ निर्णायक उपस्थिति जनाउन सकेनौं । आगामी दिनमा अझै उत्साहित भएर सशक्त तरिकाले जनतामाझ पुगी भविष्यका लागि ठोस आधार तयार गर्नुपर्नेछ । सांसद्ले जनताको स्वरलाई प्रतिनिधित्व गर्ने भएकाले पार्टी संगठन सुदृढीकरणमा मलाई थप क्रियाशील भएर लाग्नुपर्नेछ । यद्यपि प्रदेशमा संगठनका साथीहरू आआफ्नो स्तरले निकै मिहिनेत गर्नुभएको छ र थप परिश्रम गर्न तयार हुनुहुन्छ ।
तपाईंको पार्टी मधेशवादी तर तपाईं खसआर्य । संवैधानिक प्रावधानकै कारण सांसद बन्ने अवसर पाउनुभयो । हैन त ?
हाम्रो पार्टीसँग निश्चित सैद्धान्तिक आधार छ । राजनीतिक दलका लागि एउटा खास सिद्धान्त अनिवार्य नै हुन्छ । हामी समाजवादी टेकोमा उभेका छौं । यसैबाट हाम्रो नीति तथा कार्यक्रम निर्देशित छन् । अर्थात् हामी उत्पीडित, उपेक्षित र बहिष्कृत जनताको अधिकार प्राप्तिको संघर्षमा जोड दिएका छौं । नेपाली समाजमा पछाडि पारिएका जनजाति, दलित (शिल्पी), मुस्लिम, मधेशी, थारूलगायत सबै सीमान्तकृत समुदायका पक्षमा आवाज उठाउँदै आएका छौं । त्यसैले पार्टीले कुनै पनि जिम्मेवारी दिने आधार कुनै व्यक्ति खास समुदायका हुन् भनेर होइन, पार्टीको नीतिअनुरूप समतामूलक समाज निर्माणमा योगदान दिने योग्य र सक्षम पार्टीकर्मी हुनु हो । मलाई लाग्छ, पार्टीले प्रदेश सांसद छनोट गर्न जुन मापदण्ड तयार गरेको थियो, त्यसभित्र नै म परेकी छु । पार्टीले मेरो काम र क्षमताको मूल्यांकन गरेको छ । रह्यो कुरा खसआर्य हुनुको । हो, सबै कलस्टरको संसद्मा प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ भनेर राजनीतिक दलको सहमतिमै संविधानले सुनिश्चित गरेको प्रावधान हो यो । जसलाई हाम्रो पार्टीेले पनि स्वीकार गरेको छ । चुनावमा पार्टीको सहभागिता हुनुले पनि यो प्रस्ट छ । स्वाभाविक रूपमा म कलस्टरको त्यस व्यवस्थाअनुसार नै संसद्मा पुगेकी हुँ । तर, संवैधानिक प्रावधानको प्रभावले म सांसद भए भन्नेबित्तिकै पार्टीका लागि मैले गरेको कामको अवमूल्यन गर्न मिल्दैन । म निरन्तर पार्टीको उचाइ बढाउन लागिपरेकी क्याडर हुँ । प्रदेश ५ मा पार्टीको संगठन बढाउन बर्दियादेखि नवलपरासीसम्म कुदेकी छु । त्यतिमात्र होइन, पार्टीको सांगठनिक आधार भएका देशका प्रायः सबै जिल्लामा पुगेकी छु । र, अझै त्यो क्रम रोकिएको छैन । तपाईंलाई सम्झना होला गत चुनावमा म आफ्नो गृहजिल्ला बर्दियामै सीमित रहिनँ, सप्तरीसम्म पुगेँ । अहोरात्र काम गरेँ ।
प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको चुनाव सकियो । राष्ट्रियसभाको चुनावपछि पतिनिधिसभातर्फ समानुपातिक सदस्यको छनोट पनि हुनेछ । अब तपाईंको पार्टीले मूल कार्यभार के हुनेछन् ?
हेर्नुस्, हाम्रो राजनीतिक बटमलाइन भनेको संशोधनमार्फत सबै जनतालाई सर्वस्वीकार्य संविधान दिनु हो । संसद क्रियाशील हुनु र सरकार गठनजस्ता केही राजनीतिक तथा वैधानिक प्रक्रिया पूरा भएपछि हामी यसका लागि केन्द्रीय तहमा सक्रिय हुनेछौं । अर्को तपाईंलाई स्मरण होला शक्तिसम्पन्न प्रदेशसहित राज्यको पुनर्संरचना फोरम नेपालको अझ हाम्रा आदरणीय अध्यक्ष उपेन्द्र यादवजीको सुरुदेखिकै माग र अडानका कारण सम्भव भएको हो । प्रदेशसभासँगै संघीयता कार्यान्वयनको चरणमा छ । यस्तो बेला हामीलाई निकै चनाखो हुनुपर्नेछ । यी जम्मै प्रक्रियामा विभिन्न खालका जटिलता र विरोधाभासहरू आउँछन् । थरीथरीका षड्यन्त्रहरू हुन सक्छन् । त्यसलाई चिरेर जाने रणनीतिक योजनाअनुरूप काम गर्नुपर्नेछन् । मूलतः प्रादेशिक स्वायत्तता, स्वशासन र आत्मनिर्णयको अधिकारजस्ता आधारभूत राजनीतिक संकल्प पूरा हुने गरी संघीय र प्रादेशिक कानुन निर्माणलगायतका नीतिगत निर्णयहरू गर्नुपर्नेछन् । यो एउटा महत्वपूर्ण पाटो हो । तर, विकास र समृद्धिसँग जोडिएका सबालमा पनि मैले धेरै काम गर्नुपर्नेछ । राजनीतिक अधिकारको प्राप्ति नै जनताको जीवनमा सकारात्मक रूपान्तरण हुनु हो । यसका लागि शिक्षा, पूर्वाधार, उद्योग कलकारखाना र प्रदेशको पर्यटन क्षेत्र आदिको व्यवस्थापन गर्नु हो ।
चुनावी परिणामपछि अब सरकारमा जाने त होला नि ?
हेर्नुस्, सरकारमा जाने नजाने कुरा ठूला दलहरूको नियतमा भर पर्छ । जनताका पक्षमा हामी सदैव रहँदै आएका छौं । अर्थात् हामी राज्यलाई खबरदारी गर्ने तपाईंहरूजस्तै स्थायी प्रतिपक्षकै भूमिकामा छौं । रह्यो राजनीतिक रूपमा सरकार कुनै पनि दलका लागि जानै नहुने त हुँदैन नि । यो एउटा संसदीय राजनीतिक प्रक्रिया हो । जहाँ सरकार र विपक्ष हुन्छन् । तर, पार्टीले अघि सारेका माग पूरा भएमात्र सरकारमा जाने वा नजाने विषय अगाडि आउँछ । अहिले त हामी हाम्रो माग पूरा हुने प्रक्रियाप्रति मात्रै गम्भीर छौं । म विश्वस्त छु अहिलेको संसदीय गणितले हाम्रा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवज्यूलाई देशकै नेतृत्व गर्ने सम्भावना दिएको छ । यो संघीय सरकारको सन्दर्भ हो ।
प्रदेशको कुरा गर्नुभयो भने प्रदेश २ मा हामीलाई सरकारको नेतृत्व गर्ने जनादेश प्राप्त भएको छ । त्यसअनुरूप नै सबै प्रक्रियाहरू अघि बढ्दैछ ।
त्यसो प्रदेश ५ मा फोरम सरकारमा सहभागी हुँदैन त ?
हेर्नुस्, आगामी माघ २१ गतेका लागि संसद् बैठक आह्वान गरिएको छ । सभामुख र उपसभामुख चयनको प्रक्रिया सम्पन्न गर्न । त्यसपछि मात्रै चित्र स्पस्ट हुनेछ । अर्को कुरा संघीय सरकारमा सामेल हुने राजनीतिक दलको प्रादेशिक सरकारको संरचनामा सहभागिता हुने स्थितिलाई पनि नकार्न सकिँदैन । त्यसैले अहिले नै हाम्रो दल सरकारमा सहभागी हुन्छ वा हुँदैन किट्न सकिँदैन । र, यो प्रश्नको उत्तरका लागि कम्तीमा म आफूलाई आधिकारिक व्यक्ति ठान्दिनँ । यस विषयमा पार्टीको उच्च राजनीतिक तहमा विमर्श तथा अन्य दलसँग संवाद भइरहेको म अनुमानमात्र गर्न सक्छु ।
फोरमको नेतृत्वमा प्रदेश सरकार : अध्यक्ष यादव
सम्पर्कविहीन खरेल सुरक्षित
बन्द गर निषेधको राजनीति : शरतसिँह भण्डारी